१५ वर्षपछि काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन हुदै, साक्य र रञ्जित सभापतिमा भिड्दै ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
१५ वर्षपछि काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन हुदै, साक्य र रञ्जित सभापतिमा भिड्दै !
देशभरका अधिकांश जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सकिएर पालिका तह र हिमाली जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन अघि बढिसकेको
२०७८ आश्विन १५, शुक्रबार १६:३३:००
काठमाडाैँ। कांग्रेस यतिखेर देशभर १४ औं महाधिवेशनको महासंग्राममा छ । देशभरका अधिकांश जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सकिएर पालिका तह र हिमाली जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन अघि बढिसकेको छ । वडा तहको अधिवेशनपछि पालिका तहमा पनि केही जिल्लामा मात्रै अधिवेशन बाँकी छ । यस अघि क्रियाशील सदस्यले भाग लिन पाउनेमा यसपटकदेखि प्रतिनिधिमूलक ढंगलबाट पालिकाको नेतृत्व चयन भइरहेका छन् ।
शनिबार राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाकासमेत यसपटक नेतृत्व चयन हुँदैछ । यस अघि क्रियाशील सदस्यको संख्या नै धेरै भएपछि कांग्रेसमा काठमाडौं महानगरपालिकामा अधिवेशन भएको थिएन । तर, नेतृत्व चयनका लागि वडाका सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमात्रै सहभागी हुने भएपछि पालिका तहको नेतृत्व चयन निर्वाचनबाटै हुने भएको हो । ११ औं महाधिवेशनमा काठमाडौैंमा देवरत्न डंगोल सभापति भएपछि त्यसपछिका दुईवटा महाधिवेशनमा महानगरपालिका नेतृत्वविहीन भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाका सभापति र वडाबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मात्रै पालिका तहको नेतृत्व चयन गर्नेछन् । यसकारण पनि कांग्रेसको पालिका तहको नेतृत्व चयन यसपटकदेखि फरक ढंगमा भइरहेको हो । किनकी २० औं हजार क्रियाशील सदस्यसम्म रहेका पालिकामा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएपछि यसपटकदेखि विधानमा संसोधन गरेरै पालिका तहको अधिवेशनलाई प्रतिनिधिमूलक बनाइएको हो ।
‘११ औं महाधिवेशनमा महानगरपालिकाको कार्यसमितिको लागि अधिवेशन भएको थियो । तर, क्रियाशील सदस्य धेरै भएकोले १२ र १३ औं महाधिवेशनमा काठमाडौं महानगरपालिका अधिवेशन नै भएन । कांग्रेस सांसद एवं नेता भीमसेनदास प्रधान यस अघि १७ हजार क्रियाशील सदस्य हुँदा निर्वाचन समितिले महानगरमा अधिवेशन नगरेको बताउँछन् । अधिवेशन गर्न गाह्रो भएपछि यसपटकदेखि प्रतिनिधिमूलक रुपमा नेतृत्व चयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाएको बताउँछन् । प्रतिनिधिमूलक हुँदा पनि वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि गरी १२ सय बढीले महानगर कार्यसमिति चयन गर्ने प्रधान बताउँछन् ।
को–को भिड्दैछन् सभापतिमा ?
देशकै राजधानी सहर र सबैभन्दा ठूलो सहर मात्रै नभएर प्रभावशाली नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पनि यही काठमाडौं भएकोले यो महानगरको प्रतिस्पर्धालाई निक्कै प्राथमिकतामा साथ हेरिएको छ ।
महानगरको सभापति बन्न सके केही समयमै हु्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरमा नै दाबेदारी गर्नसमेत बल पुग्नेछ । त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमासमेत आफ्नो गुटलाई जिताउन सहज हुने भएपछि पालिका तहमा नै आफू निकटका नेता जिताउन सिनियर नेताहरू पनि लागेका छन् । किनकी काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
कांग्रेस केन्द्रमा मुख्य दुई ठूला गुटबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने अवस्था फरक छ । यहाँ कांग्रेसका उपगुटका नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सभापतिको उम्मेदवारमा प्रकाशमान सिंह निकटका नीलकाजी शाक्य र कृष्णप्रसाद सिटौला प्यानलका भीमसेनदास प्रधान निकटका प्रगतिमान रञ्जित चुनावी मैदानमा छन् ।काठमाडौंमा परम्परागत रुपमा नै ठूला गुटभन्दा नेता विशेषको पकड छ । यसकारण उपगुटलाई मुख्यगुटले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिंह निकटका शाक्यलाई पौडेल पक्षले र सिटौला (भिमसेनदास) निकटका रञ्जितलाई संस्थापन शेरबहादुर देउवा निकटको सहयोग रहने बताइन्छ । काठमाडौं कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू भीमसेनदास प्रधान, ध्यानगोविन्द रञ्जित र तीर्थराम डंगोलको समर्थनमा प्रगतिमानलाई उठाइएको बताइन्छ ।
जिल्ला अधिवेशनमा प्रधानसहित नेताले सभापति देउवा निकटका नेतालाई जिताउने र महानगरमा आफूपक्षीय नेता जिताउने तयारी गरेका छन् । तर, अर्कोतिर शाक्यलाई प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह, गगन थापासहितको समर्थन रहेकोले कांग्रेस महानगरको चुनाव रोचक हुने बताइन्छ । जिल्ला सभापतितर्फ भने लागि देउवा पक्षबाट दामोदार खड्का र उपेन्द्र कार्कीसहितका नेता चर्चामा छन् ।
कम्युनिष्टको गढ मानिएको वडा नम्बर २५ मा नीलकाजीले वडा अध्यक्षको चुनाव जितेका थिए । नीलकाजी कलाकार पनि हुन् । कलाकार भए पनि उनी आफ्नो कोर एरियामा मात्रै बढी परिचित भएको बताइन्छ । प्रगतिमान काठमाडौं तरण दलको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । रञ्जितले नेविसंघकोसमेत राजनीति गरेका थिए । काठमाडौंमा यसरी पुराना नेता नीलकाजी र युवा पुस्ताबाट प्रगतिमान चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्
एमाले वडा महाधिवेशन :कात्तिक ६ गते गर्ने तयारी
विप्लवका माग पूरा गर्न गृहमन्त्रीले थाले छलफल
सप्तरीमा भाइरल ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढे
संसद विघटन सही साबित गर्न खोज्दै एमाले, अवरोध हटाउन पहल भएन
मनकामनाको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्छु : श्रमम...
सभामुख सापकोटाले भने-एमालेसँग छलफलको लागि तयार छु